Pejy ho an'ny Tanora - Page 2 sur 2 - Lalamasaka Hatry ny Ela
Accueil - Pejy ho an'ny Tanora - Page 2
Pejy ho an’ny Tanora
par MA Daoud · Published 26 septembre 2019 · Last modified 3 décembre 2019
Ny fijangajangana sy ny voka-dratsy aterany 2
NY FAHOTANA IZAY MITARIKA FAHAFATESANA BETSAKANY FAHOTANA IZAY MAHATONGA NY FAHATEZERAN’ ANDRIAMANITRA. … tohiny Ny anankiray fahatelo dia ao amin’ ny (Gen. 20), raha nisy mpanjaka mpanompo sampy iray naka an’ i Saray, vadin’ i Abrama, noho ny hatsaran-tarehiny. Niseho tamin’iAbimeleka tamin’ny nofy nony alma Andriamanitra ka nanao hoe: « Indro, ho faty ianao (tsy hisy famindrampo mitondrafahasitranana mihitsy… fa dia fahafatesana) noho ny...
Ny fahatsapana ny famonjena azo amin’ny alalan’i Jesosy Kristy dia lazaina koa hoe fahaterahan’ny fanahy. Ny tenan’i Jesosy no nampiditra io fampianarana io. “tonga tany amin’ny azy Izy, fa ny azy tsy nandray Azy. Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra , dia ireo izay mino ny Anarany: dia ireo izay tsy nateraky ny ra, na...
par MA Daoud · Published 25 septembre 2019 · Last modified 3 décembre 2019
Mitsahatra ny ady ao anaty rehefa voadio ho afaka amin’ nyratsy ny fo. Ny ady amin’ ny nofo dia mifarana rehefa voaroaka avy ao amin’ ny fanahy izay rehetra fanoherana an’ Andriamanitra. KRISTY NO MANJAKA tsy misy mandrafy ! Misy anefa fahavalo hafa ankoatra ireo ao anaty, izay tokony hiadiantsika mafy mihitsy hatramin’ ny farany. « Isika tsy mitolona amin’ ny nofo aman-dra, fa...
Avela ho tonga ny fitsapana noho ny antony. Ny faharesena tsirairay dia mamela antsika halemilemy kokoa hiatrika ny ady manaraka, fa ny fandresena tsirairay kosa mahatonga antsika ha­tanjaka kokoa. Ny fitsapana mandrakariva dia tonga amin’ ny faritra ma­lemy indrindra amin’ ny toetrantsika. Avelan’ Andriamanitra izany satria fantany fa mandresy isika rehefa mandresy ny fakam­panahy eo amin’ io faritra io ! Ny fandresena vaovao tsirairay...